I-Synephrine HCL Powder-Isitshisi esinamafutha kunye nezixhobo zokunciphisa umzimba
/Blog/Ithala/I-Synephrine HCL Powder-Isitshisi esinamafutha kunye nezixhobo zokunciphisa umzimba
ezaposwa ngomhla 11 / 25 / 2019 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Namhlanje, ipesenti ephezulu yabemi ikhangela iindlela zokugcina ubunzima besempilweni. Ewe, phakathi kwabo bonke, ukusetyenziswa kwe I-powder Synephrine HCL yenye yeendlela ezikhuselekileyo onokugcina ngayo amanqatha angenampilo. I-Synephrine powder yinkomfa yamakhemikhali e-alkaloid engaqhelekanga ukuyifumana. Yinto yendalo efumaneka kwizityalo ezifana neorenji ezikrakra, phakathi kwabanye.
Ulwakhiwo lwe molekyuli yeSynephrine iyafana naleyo ye-ephedrine, lelinye lawona macandelo atshisa amanqatha. Nangona kunjalo, Efdrine akusekho kwimarike njengesongezo sokutya; ngenxa yoko, iSynephrine yeyona ndawo ifanelekileyo. I-Octamine yimetabolite kaSynephrine kwaye ukuza kuthi ga ngoku idume ngeempawu zayo zokutshisa amanqatha.
ISynephrine sisiphathamandla esibuthathaka se-alpha-1 kunye ne-alpha-2 adrenoreceptors. Imisebenzi emibini ngokuphendula kwi-adrenaline kungoko inyusa uxinzelelo lwegazi kunye nenqanaba lentliziyo. Ke ngoko, iSynephrine 5985-28-4 ayinakulindeleka ukuba ibangele ukonyuka kwentliziyo yakho okanye uxinzelelo lwegazi.
Lowo ngumahluko ophambili phakathi kwe-ephedrine kunye ne-Synephrine 5985-28-4, njengoko i-ephedrine yaziwa ngokwenza ukuba zombini i-alpha-1 kunye ne-alpha-2 adrenoreceptors ngamandla.
I-Synephrine HCL ikhuthaza i-neuromedin U2 receptors. Ezi ziimolekyuli ezibekwe kwihypothalamus kwaye zonyusa ukuphaphama.
I-Synephrine isebenza ngokumisa imveliso ye-eotaxin-1. Yiloo molekyuli eshukumisela ii-eosinophil ukuba ziye kwindawo evuthayo. Ikwathintela umsebenzi we-NADPH oxidase, oveliswa zii-neutrophils kwaye emva koko, udala iintlobo ezininzi zeoksijini ezisebenzayo.
(1) iSynephrine HCL yokuThoba umzimba
Ukutyeba ngokugqithisileyo ayisiyongozi yempilo kuphela, kodwa kunokukwenza ubonakale umbi. Amafutha atshisayo eza nezibonelelo ezinkulu, kubandakanya ukukwenza uphile ixesha elide. Ngethamsanqa, ukusetyenziswa kweSynephrine HCL sesinye sezicwangciso eziqinisekisiweyo onokuzisebenzisa ukunyibilikisa amanqatha omzimba. Nantsi indlela ekunceda ngayo ukufezekisa le njongo;
Akunyanzelekanga ukuba uye ejimini kwaye uzive udiniwe kwaye ulele; USynephrine ukufumene. Isebenza njengamafutha ngokukutya ngawo onke amandla owafunayo ukuze ube neseshoni yokubulala. Iimpuku ezenziwa kunye I-powder Synephrine baqwalaselwe ukuba babenakho ukubhukuda ixesha elide, kubonisa ukuba amanqanaba abo amandla ayenyuka.
Ngokuphucula amanqanaba ombane, iSynephrine yaziwa nangokuphucula ukusebenza kweembaleki. Iziphumo ezidityanisiweyo zenkcitho yamandla eyandisiweyo yamanqatha kunye nokukhuthaza kukhuthaza ukusebenza kunye nokunyusa inani lemveliso efunyenwe kwimithambo ye-aerobic kunye ne-anaerobic. Oko kuyenza ukuba ibe sisongezelelo sangaphambi kokuzilolonga kunye ne umtshisi manqathe kakhulu.
Leyo yinkqubo yokwaphula amafutha emzimbeni. Kuchazwa ngcono njengemetabolism. I-Synephrine isebenza ngokwandisa i-metabolic rate yiyo loo nto yenza ukuba umntu atshise ipetroli ngokukhawuleza. Icacisa ukuba kutheni ukuthatha iSynephrine kuyakwenza ukuba utshise amanqatha amaninzi ukusukela xa imetabolism iphezulu, umzimba wakho uya kufikelela kumanqatha agciniweyo ukuze ufumane okungakumbi.
Idosi yeSynephrine HCL iyahluka ukusuka komnye umntu uye komnye. Nangona kunjalo, idosi esemgangathweni njenge ukulahleka kwesisindo yi-100mg ngosuku. Uphando, nangona kunjalo, lubonisa ukuba idosi ye-Synephrine HCL ye-35mg nayo iyasebenza. Inkqubo ye- I-dosage ye-Synephrine HCL akufuneki ibe ngaphezulu kwe-200mg ngosuku ukunqanda ubuthi.
Kwimpembelelo yokwakha umzimba yeSynephrine okanye njengesitshisi esinamafutha, kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyayithatha into yokuqala ekuseni kunye nemizuzu elishumi elinesihlanu ukuya kumashumi amathathu ngaphambi kokuzilolonga. Kucetyiswa ukuba ubathathe ngamanzi.
Ngelixa abanye abantu banokukhetha ukuthatha iSynephrine iyodwa, abanye banokukhetha ukuyibeka. Ungayisebenzisa ngokudibeneyo nezinye iipowder zokuphulukana nobunzima kunye nezo zonyusa amandla akho. IYohimbine igcwele kakuhle ngeSynephrine, ngakumbi ukuba eyona njongo yakho iphambili kukuthoba umzimba.
Ngaphandle kwamathandabuzo, iSynephrine HCL sisililo esingcwele somgubo wokunciphisa umzimba. Inceda ekunciphiseni ukutya kwakho ukuba ujonge ukutya kancinci okanye ukunciphisa ukuthatha amashwamshwam angenampilo. Unokugqiba kwelokuba unciphise ukutya kwakho I-Synephrine yongeza Iiyure ezingamashumi amabini anesine ukuba ufuna ukungena ngokukhawuleza.
Ukuba isetyenziswe ngokudibanisa nokutya okunengqiqo kunye nokuzilolonga, uya kuqaphela ukwakha iSynephrine kunye nokulahleka kwesisindo kwiiveki ezimbini zokusetyenziswa. Nabani na osokolayo kukutya, ukutya kakhulu, okanye umntu oziva ngathi ufuna ukulahla amanqatha emizimbeni yabo, le yeyona nto ibalulekileyo!
Ngoku uzimisele ukufikelela kwiinjongo zakho zobunzima, usithathaphi esi sitshisa? Uninzi lweenkampani ezininzi zinokuthembisa ukukunikezela ngeyona Synephrine ilungileyo, kuya kufuneka ulumke kakhulu njengoko abanye besenokukuthengisela iimveliso ezingezizo. Sikunika ixabiso lemali yakho ngokubonelela ngezixhobo zeSynephrine ezikhuselekileyo nezisebenzayo. Nje ukuba Thenga iSynephrine ukusuka kuthi, uyaqinisekiswa ukuba uya kutshisa amanqatha kwaye uphulukane namafutha ngokukhawuleza nangokusisigxina.
Ukwehla kwesisindo sakho okongezelelekileyo akukho mngcipheko kuba zi-100% zendalo kungekho zongezo zifihliweyo. Myalelo we-'mangaliso 'wokulahleka kwesisindo kumanzi namhlanje kwaye ulahlekelwe iipounds ezingafunekiyo kunye nokonwabela izibonelelo zokwakha umzimba zeSynephrine.
Isikhokelo sezeMpilo kwezokuXhaswa ngokuTya, nguShawn M. Talbott, Kerry Hughes, iphepha 13
I-Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) isebenza njani kubaakhi bomzimba Ngaba u-Orlistat usebenza njani njengechiza lokuLawula ilahleko?